आफ्नो लोग्नेबाट बच्चा भएन कृष्णलाई खेताला लाए… - www.kchhakhabar.com
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०८, २०७४ समय: १४:४०:०९
काठमाडौं । धेरै वर्षपछि आज आज अचानक भेट हुँदा कृष्ण र कुमार असाध्यै खुसी भए। अप्रत्यासित भेटले उनीहरुको मानसपटलमा बाल्यकाल चल्मलाउन थाले। बाल्यकालको साथी कृष्ण अमेरिकाबाट पिएचडी सकेर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएको खबर सुनेर कुमारका आँखा खुसीले रसाए। ‘घरपरिवारको बोझले थिचिएर धेरै पढ्न सकिनँ’, कुमारले कृष्णसँग दुखेसो पोख्यो, ‘म त कृषक पो भएर बसेको छु।’
खानापछि कुवेर र कुशल दुवै स्कुल गए। जानु मेलापात गइन्। वर्षौंपछि दुवै साथी फुर्सद निकालेर आँगनमा गफिए, न्यानो घाम ताप्दै । कुरैकुराको सिलसिलामा कुमारले सोध्यो, ‘कृष्ण बिहे गरीस् कि छैनस्? कि सँधै क्याम्पस पढाएर बस्ने विचार छ? बुढो होलास् नि?’
कुमारको जवाफ नसकिँदै कृष्णले सोध्यो, ‘अनि पहिलेकी भाउजू खोई त?’ कुमारको पहिलो बिहे गाउँमै भएको थियो। कुशल र कुवेर उनकै चिनो हुन्। ‘दैवले अकालमै चुँडेर लग्यो उनलाई’, कुमारले गहभरि आँसु पार्यो, ‘त्यसपछि जानुसँग बिहे गरेँ।’ नयाबाटो डटकम